Turkiga Oo Ku Eedeeyay Dowladda Mareykanka Taageerada Dagaalya... | Universal Somali TV
Turkiga Oo Ku Eedeeyay Dowladda Mareykanka Taageerada Dagaalyahanada Kurdishka Ee Suuriya.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Turkiga ayaa u yeertay diblomaasiga sare ee Maraykanka, ee Ankara Philip Kosnett, si ay wax uga weydiiyaan taageerada Washington iyo tababarka ciidamada Kurdishka ee Suuriya.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale xaqiijiyay in kulanka uu dhacay, isagoo intaa ku daray, "in aysan doonayn inay kasii hadlaan faahfaahinta wada hadalka."
Masuulka loo yeeray ayaa timid ka dib markii ay soo baxday warar sheegaya in ciidamada Mareykanka ay bilaabeen inay tababar militari siiyaan 400 oo dagaalyahanada ka tirsan Kurdishka YPG.
Turkiga ayaa ka welwelsan joogitaanka xagjirayaasha Kurdishka meel u dhow xudduuda ay la wadaagto Suuriya, waxaana ay ka soo horjeeda dedaallada Maraykanka ee ku aaddan tababarka iyo hubaynta ku sugan dalka Carabta.
Maraykanku wuxuu ballan-qaaday inuu hubka ka soo celin doono xagjiriinta kurdiyiinta ka dib markii kooxda argagixisada ah ee Daacish oo Kurdidu ay la dagaallamayaan, laga saaro Suuriya.
Kurdidu waxay weli ku sugan yihiin dhulka ay qabsadeen markii ay la dagaallamayeen Daesh, si kastaba ha ahaatee, Daacsh ayaa si guul leh looga adkaaday waddanka Carabta.
Ankara ayaa YPG u aragtay waaxda Suuriya ee ka tirsan Xisbiga Shaqaalaha ee Kurdistan (PKK) oo dagaal kula jirtay Turkiga tan iyo sanadkii 1984tii.
Taageerada milateri ayaa markii ugu horreysay waxaa biloway maamulkii hore ee madaxweyne Barack Obama, oo siiyey hub iyo tababar waxa ay ugu yeeran ciidammada Dimuqraadiga ee Suuriya (SDF).
Maalintii talaadada ayay aheed markii uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan sheegay in dalkiisa uu sii wadi doono howlgalkiisa milateri ee waqooyiga Suuriya si uu uga ilaaliyo xagjirayaasha Kurdida xuduudaha Turkiga.
Kan-xigaXukuumadda Kenya Oo Aan &#039;Ku Fara...
Kan-horeXildhibaannada haweenka ee dalka Mara...
40,635,739 unique visits